‘हे महामानवहरु सुतेका छौं भने उठ ।’(विचार)
बिके महतो -
फेसबुकमा(न्युज फिड) हेर्दै थिएं । साथीहरुको फोटो र स्टाटसमा लाइक गर्दै रमाइरहेका थिए । तर, जब यी फोटो देखें । म स्तब्ध भए या भनौं अक्क न बक्क भए ।
तस्वीरमा दुईजना नाबालक कतिबेला खाना पाक्ला र खाउँला भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । खाना पकाउँदै गरेकी महिला (मधेसतिर जनानी भनिन्छ) ती दुई अर्धनग्न बालकको आमा छिन् शायद । चारवटा केराको थम्बालाइ बाँधेर हाथे डुंगामा खाना पकाइरहेकी छिन् । उनको मलिन मुहारमा देखिएको अदृश्यात्मक पीडालाई शब्दमा व्यक्त गर्न सार्मथ्य छैन, म सँग ।
तस्वीरमा सानो घर त देखिन्छ । तर, त्यसमा छ त केवल पानी नै पानी । उनको बासस्थान छैन । कहाँ सुत्नेछन् ती अबोध बालकहरु । बाढीको कहरले उनीहरुलाई उठिबास भएको छर्लँङ्गै देखिन्छ, यी तस्वीरमा ।
केहीदिनदेखि सक्रिय भएको मनसुनले नेपालको पूर्वी तराई र पश्चिमी तराई भु–भाग डुबानमा परेको छ । अझै वर्षा रोकिएको छैन । हजारौं घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । तर, हालसम्म पनि बाढी पीडितलाई व्यवस्थित ठाउँमा लग्न उचित पहल भएको देखिँदैन ।
देशमा अहिले सरकार त छ, तर काम चलाउ मात्र । सरकारले केही गरेन भनेर कसरी आरोप लगाउने ? गतवर्ष वैशाख १२ र २९ को विनाशकारी भूकम्पले पहाडको आँसु सुक्न नपाउँदै तराईमा अर्को प्राकृतिक विपद् आइपरेको छ । बाढीले मधेसमा बस्ने हजारौं नेपालीहरुको घर बगाएका छन् । उनीहरुसँग पर्याप्त खाद्यान्न छैन् । बस्ने बास छैन् । उनीहरुको अवस्था दिनदिनै दयनिय बन्दै गइरहेको छ ।
सप्तकोशिमा पानी मडारीरहेको छ । खतराको रातो संकेत पार गरिराखेको अवस्थामा पुगेको छ । तर, कोसीका ढोकाहरु खोलिएका छैनन् । कोसीका केही ढोकाहरु खोलिएन भने तराईका अधिकांश जिल्लाहरु डुब्ने देखिन्छन् । तर, नेताहरुले यसतर्फ पर्याप्त चासो दिनसकेको छैन ।
यतिबेला त मेरो मनमा नानाथरीका प्रश्न मात्र प्रस्फुटित भइरहेको छ । के बाढी पीडितलाई राहत दिन सरकार नै चाहिन्छ ? मानिसहरुमा हुने मानवियताले पुग्दैन र ? के हामीले मानवतालाई बेचिदिएका छौं ? यदि तपाई÷हामीमा मानवता अलिकति पनि बाँकी छ भने उठ्नैपर्छ । जाग्नै पर्छ । पाइला हामीले चाल्नैपर्छ ।
तराईमा ६ महिने लामो आन्दोलन गरेका मधेसका नेताहरु कहाँ छन् यतिबेला ? हुनतः सत्तामा पुगेर ठूलाठूला महल बनाउन सफल भएकाहरुलाई बाढीको कहरमा बाँच्न बाध्य यी निमुखा जनताको पीडाबारे ती नेतालाई के थाहा ? आन्दोलनमा मर्नेहरुलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने आह्वान गरेका नेताहरुलाई के थाहा ? नभए मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुले ‘कसका लागि आन्दोलन ?’ गरेका थिए, जवाफ दिनैपर्छ ।
म मेरो रचना कथित नेताहरुको आलोचना गरेर विताउन चाहन्न । बरु म भन्न चाहन्छु, ‘हे महामानवहरु सुतेका छौं भने उठ ।’
तस्वीर ः फेसबुक